Как проверить стартер дома? | Полезная информация для всех
အဆိုပါ starter အိမ်မှာစစ်ဆေးဘယ်လိုနေသလဲ?
အဆိုပါ starter အိမ်မှာစစ်ဆေး, တကဝက်အူလှည့သို့မဟုတ်လိမ်ဖဲ့ခြင်း ယူ. ဆိပ်ကမ်းအပေါ်တိုက်နယ်စေရန်လိုအပ်ပေသည်။ သငျသညျမီးစများ၌၎င်းတွေ့မြင်လျှင်, starter အလုပ်မလုပ်ပါဘူး, အဲဒါကတစ်ဦးဓါးနှင့်အတူဆိပ်ကမ်းရှင်းလင်းဖို့လိုအပ်, ဒါမှမဟုတ်ဘက်ထရီများ၏ရွာ, ထို့နောက်သူကအားသွင်းသို့မဟုတ်အစားထိုးရမည်ဖြစ်သည်လျှင် relay ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်။
(အိမ်မှာ) ကို starter စစ်ဆေးစေရန်, သငျသညျ (သူ၏လုပ်ရပ်များနှင့်အသေးစိတ်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်၏ခြေလှမ်းရှင်းပြချက်နေဖြင့်ခြေလှမ်းနှင့်အတူ) ကိုမြတ်နိူး၏တဦးတည်းလုယူသောဗီဒီယိုညွှန်ကြားချက်, ကိုသုံးနိုင်သည်။
ဤနေရာတွင် (Youtube ကို site ပေါ်တွင် razmeschn) ကိုဗီဒီယို Watch:
ဘက်ထရီအနုတ်လက္ခဏာမှထူထပ်သောဝါယာကြိုးမှတဆင့်အပြုသဘောဝါယာကြိုးအပေါင်းဘက်ထရီထည်ကဆက်သွယ်ထားတဲ့ကြေးနီအဝတ်လျှော်နှင့်အတူ (က key ကို 13 ကဲ့သို့) တစ်ဦးခွံမာသီးရှိပါတယ်။ ထိန်းချုပ်မှုဝါယာကြိုး retractor relay ကိုဖွင့်ဘက်ထရီပေါင်းမှ shorted ။ အဆိုပါ starter ဝင်ငွေသငျ့သညျ။ အကွေ့အကောက်များသောကျိုးပဲ့မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်နွေးဖြစ်လာခဲ့သည်လျှင်ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, starter အအေးဆက်လက်တည်ရှိရပါမည်။
21 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,268 စက္ကန့်ကျော် Generate ။